သင့်ချစ်သူကို ချစ်ကြောင်းဖော်ပြရန် နည်းလမ်း ၅ ခု Bezzia
သင့်ချစ်သူကို ချစ်ကြောင်းဖော်ပြရန် နည်းလမ်း ၅ ခု
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | 24/11/2021 22:28 | Relaciones
လက်တွဲဖော်ကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တွယ်ကပ်လာသောအခါတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ချစ်ခင်မှုကို ပြသခြင်းသည် အဓိကဖြစ်သည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို မချစ်ဘူးလို့ ရိုးရှင်းတဲ့အချက်ကြောင့် အဆုံးသတ်ကြပါတယ်။ ပါတီများထဲမှ တစ်ဦးက အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျောက်ကွယ်သွားမည့် အရာတစ်ခုကို မျှော်လင့်ပြီး စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြေကွဲခြင်းကဲ့သို့သော ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထို့ကြောင့် လင်မယားနှစ်ယောက်အတွင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မည်သို့ဖော်ပြရမည်ကို သိရန်နှင့် အချစ်၏မီးတောက်ကို ရှင်သန်နေရန် အရေးကြီးသည်။ နောက်ဆောင်းပါးတွင် သင်ချစ်ရသူကို ချစ်ကြောင်းဖော်ပြရန် နည်းလမ်းငါးခုကို ဖော်ပြပါမည်။
သင့်ချစ်သူကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြရန် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ စကားလုံးများဖြင့် ဖြစ်သည်။. ရိုးရှင်းသော စကားဝိုင်းတစ်ခုတွင်၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ သို့မဟုတ် စာလုံးများတွင် အသုံးဝင်နိုင်သည်။ အရေးကြီးတာက အချစ်ဆိုတာ အချိန်တိုင်းရှိနေတယ်ဆိုတာ တစ်ဖက်လူက သိအောင် ခံစားချက်ကို စကားလုံးတွေနဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောနိုင်ဖို့ပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြဖို့ ငွေအများကြီး သုံးစရာမလိုပါဘူး။ ရိုးရှင်းသောအသေးစိတ်အချက်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသရန် စွမ်းဆောင်နိုင်သရွေ့ လုံလောက်သည်ထက်ပိုပါသည်။ အချစ်စာတစ်စောင်မှသည် ရင်ခုန်စရာကောင်းသောနေရာသို့ လျှောက်လှမ်းပါ။ ချစ်ရသူသည် အံ့အားသင့်သွားပြီး အချိန်မရွေးရရှိမည့်အသေးစိတ် သို့မဟုတ် လက်ဆောင်ကို စောင့်မနေဘဲ အရေးကြီးပါသည်။
သင်ချစ်ရသူအပေါ် ထားရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သို့မဟုတ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြရန် နောက်တစ်နည်းမှာ ချစ်ရသူကို အကျိုးပြုနိုင်သော အပြုအမူအမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အိမ်တစ်ဝိုက်တွင် အလုပ်ကိစ္စများ သို့မဟုတ် လွတ်မြောက်မှုနှင့် အားလပ်ချိန်ရှိခြင်းဟု ယူဆနိုင်သော အခြားလုပ်ဆောင်မှုများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ဇနီးမောင်နှံထံမှ အကူအညီအချို့ရနိုင်သည့်အတွက် အမြဲကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ် စုံတွဲတွေရဲ့ ပြဿနာတော်တော်များများဟာ ရိုးရှင်းတဲ့အချက်ကြောင့်၊ အရည်အသွေးပြည့်မီသော အချိန်များကို တစ်ယောက်တည်း သုံးစွဲရန် ခက်ခဲသည်။ အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်စေ မိသားစုဝေယျာဝစ္စကြောင့်ဖြစ်စေ လင်မယားနှစ်ဦးသည် အန္တရာယ်ရှိစွာ လစ်လျူရှုခံရပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြဿနာအမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်လာသည်။ သင်ချစ်ရသူအား သင်မည်ကဲ့သို့ခံစားရကြောင်းဖော်ပြရန် အရေးကြီးသောနည်းလမ်းမှာ အတူတကွအချိန်ဖြုန်းပြီး သံယောဇဉ်ခိုင်မြဲစေရန်ဖြစ်သည်။ ရိုမန်းတစ်ညစာ သို့မဟုတ် တစ်ယောက်တည်း စကားစမြည်ပြောခြင်း၏ ရိုးရှင်းသောအချက်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
လက်တွဲဖော်အပေါ် အမျိုးမျိုးသော ခံစားချက်များကို ဖော်ပြသောအခါတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုသည် အဓိကဖြစ်သည်။. ရိုးရှင်းသော အနမ်းမှသည် သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက် နမ်းရှုံ့ခြင်းဆီသို့။ အချိန်တိုင်း အရေးကြီးတာက တစ်ဖက်သားကို ချစ်သလို ချစ်သလို ခံစားနေဖို့ပါပဲ။ လူများစွာသည် လိင်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှု မှားယွင်းစွာ ပေါင်းသင်းကြသည်။ လိင်ကိစ္စထက် သာလွန်တဲ့ကမ္ဘာကြီး ရှိသေးပြီး ဇနီးမောင်နှံတိုင်းအတွက် အသားအရည်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ စုံတွဲတိုင်းအတွက် အခြားသူရှိနေသည်ဟု ခံစားနိုင်စေရန် အရေးကြီးသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြခြင်းများသည် ပုံမှန်ဖြစ်သင့်ပြီး လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှ တတ်နိုင်သမျှ ဝေးဝေးသို့ ထွက်ခွာသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲ » Relaciones » သင့်ချစ်သူကို ချစ်ကြောင်းဖော်ပြရန် နည်းလမ်း ၅ ခု
ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် အကြံပြုချက်များနှင့် လှည့်ကွက်များ
ဆောင်းဦးအတွက် Brownie အဆိုပြုချက်များကို ရှာဖွေပါ။